Ihe ị ga-ahụ na obodo Croatian nke Zagreb | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Zagreb, Croatia
La isi obodo Croatia O nwere otutu obi uto, obu ezie na odighi anya dika ndi nleta dika Dubrovnik, nke n’agha bu otu n’ime ihe ochicho obodo a. Agbanyeghị, anyị maara na Zagreb bụ obodo nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye ndị kpebiri ịhụ ya, ebe o nwekwara ikuku nke anaghị agakarị ndị njem nleta ma ọ bụ oke.
El ochie obodo O nwere isi nke mmasị ndị kwesịrị nleta, na o doro anya na ọ bụ obodo ịkwụsị na ị enjoyụ kọfị na mbara ala ya. Nke a Central European-style obodo bụ ihe dị oké mkpa na-akwụsị ma ọ bụrụ na ị na-eme a ụzọ site na Balkans, otú anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike hụrụ na ya.
1 Chọọchị San Marcos
2 Ọnụ Gatezọ Stonemá Nkume
3 Rslọ elu Lotrscak
4 Ahia Dolac
7 Katidral Zagreb
Chọọchị San Marcos
Nke a na chọọchị bụ otu n'ime ihe ndị kasị hụrụ na obodo. E wuru n'ụdị ndị Romanesque na narị afọ nke 15, e mechara rụzigharị ya na ngwụsị Gothic. Na facade nke ebe ndịda ị nwere ike ịhụ ọnụ ụzọ nwere ọnụ ọgụgụ XNUMX na ụdị Gothic. Ma n'ezie ihe na-esi na ya apụta ihe ọmarịcha na peculiar bụ ụlọ ya, nke dị iche na elu ụlọ ọ bụla anyị hụburu. N’elu ụlọ ụka ahụ ka uwe mkpuchi abụọ dị, nke Zagreb na nke alaeze nke Croatia, Dalmatia na Slovenia. Na mgbakwunye, ụka a dị na etiti etiti, na St Mark Square, ebe enwere ụlọ ndị ọzọ dị mkpa, dịka ndị omeiwu Croatian ma ọ bụ oche nke gọọmentị.
Ọnụ Gatezọ Stonemá Nkume
Ọnụ Stonezọ Stonemá Nkume ma ọ bụ Kamenita vrata bụ otu n'ime ụzọ mbata anọ nke dị na mgbidi obodo ochie nke na-adịghịzi eguzo. Mgbidi ndị a gbara gburugburu ebe bụzi ọgbakọ ochie Gradec, nke ghọrọ obodo nweere onwe ya. Ọ bụ ezie na ọ malitere na narị afọ nke XNUMX, ọdịdị ya ugbu a bụ n'ihi mmezigharị ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, ọnụ ụzọ ahụ nwere akụkọ nke ya, ebe ọ bụ na narị afọ nke XNUMX ọkụ gbara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ụzọ ahụ dum, ma e wezụga ihe oyiyi nke Virgin na Nwa. Nke a mere ka ọtụtụ mmadụ kwenye na ọnụ ụzọ ahụ bụ ọrụ ebube nakwa na o nwere ụdị ike. N'ime ọnụ ụzọ na n'okpuru mgbidi e nwere oghere nke enyerela dị ka ụlọ ekpere, yabụ taa ọ bụ ebe njem uka.
Rslọ elu Lotrscak
Nke a ụlọ elu malitekwara na narị afọ nke XNUMX ọ bụkwa akụkụ nke mgbidi ahụ na-agbachitere. N'ime ụlọ elu ahụ, e nwere ebe a na-ese ihe. Tiketi ahụ nwere ohere ịrịgo arịgo n'ụlọ elu ahụ iji nwee ọmarịcha obodo. Na elekere iri na abụọ nke ụtụtụ, a na-agba egbe egbe iji cheta ihe mere eme.
Ọ bụrụ na ihe anyị masịrị bụ ịhụ izi ezi nke obodo, mkpọtụ ahụ bụ nke ha, mgbe ahụ anyị ga-aga Dolac Market. N'ebe ọwụwa anyanwụ ahịa n'èzí na-eme n'ụtụtụ na Kaptol. Na ahịa ọ ga-ekwe omume ịchọta ngwaahịa kachasịsịsịsị iche nke ọdịnala ọdịnala ya, yabụ ọ ga-abụkwa nleta na-adọrọ mmasị. I nwekwara ike ihu ulo oru aka. Nke kachasị mma, ọ bụghị ahịa nke njem emetụtala, yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ikuku dị mma.
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ịnụ ụtọ ikuku ọkụ n'oge ọ bụla n'obodo, anyị ga-aga n'okporo ámá a, nke dị na mpaghara ochie nke Gradec. Okporo ámá a pụtara maka mpaghara ebe ị nwere ike chọta ọtụtụ Ogwe na a na; ikuku, nwere ọtụtụ teres na ụlọ nri ebe ị nwere ike ịkwụsị ihe ị ga-eri. Ọ bụ ebe kachasị mma ịkwụsị izu ike ma hụ ikuku nke obodo ahụ mgbe ị na-anụ ice cream ma ọ bụ kọfị.
Nke a nwere ike ọ gaghị abụ otu ebe kachasị adọrọ mmasị na njem nlegharị anya na ụwa, mana ihe ọchị nwere ike ịbụ ihe ọchị ma ọ bụrụ na ịnọtụbeghị. Ihe egwuregwu a na-eme jikota obodo Gradec na ime obodo. Agbanyeghi na enwere ike ime njem ahụ n'ụzọ zuru oke, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ mgbe ị ga-abanye n'otu n'ime njem ndị a. Site n'ụzọ, ị nwere ike ịnụ ụtọ echiche nke obodo ahụ site n'elu.
Katidral obodo ahụ dị na agbata obi Kaptol, wuru na neo-gothic style. Ihe kachasị mkpa bụ ụlọ elu Gothic ya abụọ dị larịị nke na-ebili na mbara igwe na-apụta site n'ọtụtụ isi obodo ahụ. Templelọ nsọ mbụ ahụ nke guzoro n'akụkụ a sitere na narị afọ nke XNUMX, mana a rụzigharịrịrị ya ruo mgbe ọ ruru nke dị taa. N'ime ị nwere ike ịhụ sarcophagus nke nwere nwa bebi plastik nke bụ nitationomi nke Lodzije Stepinac.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Zagreb, Croatia